ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အိန္ဒိယ ရောက်စဉ် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အိန္ဒိယ ရောက်စဉ် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အိန္ဒိယ ရောက်စဉ် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်
Posted by nyanay on Jul 30, 2010 in Myanma News, News |6comments
၀န်ခံချက်။ ။source by : FREENDON NEWS GROUP
ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာနေပီး ဒါကို ဒီနေ့မှသိတယ်ဗျာ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ပါးစပ်လေးပိတ်ပီးနားဖွင့်ထားမှ သတင်းအမှန်တွေတာတင်ပေးကြပါ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိရတာပေါ့
ဟာ…ဒီသတင်းမျိုး ထပ်သိချင်တယ်ဗျာ …..dvb, voa,rfa,voa တို့က မလွှင့်သေးဘူးနော။
၂၈ ရက်နေ့က ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဆီကို ဂျီတော့ခ်က လာတဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ပလူပျံအောင် ရောက်လာတော့ ဒီကိစ္စ တကယ်ဖြစ်ပါစေလို့တောင် ဆုတောင်းမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခင့် ယခင် မက်ဆေ့ခ်ျ အတွေ့အကြုံများအရ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကောလဟာလပဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ီဦးသန်းရွှေကြီးကလည်း ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ချေကို ကြိုတွေးမိမှာပါ။ ဒါကြောင့် သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ အိန္ဒိယကို သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ မောင်သန်းရွှေကြီးလည်း နေပြည်တော်ပြန်ရောက်လို့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနဲ့ တွေ့နေလောက်ပါပြီ။
၂၇ ရက်နေ့ညကတောင် ထမင်းစားရင်း ဒီအချိန် မြန်မာပြည်မှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အပြောင်းအလဲတခုခုကို အရမ်းလိုလားနေကြပြီလေ။
ဒီသတင်းကို ဆိုဒ်တစ်ဆိုက်မှာအရင်ဆုံးဖတ်မိလိုက်တယ်.. ပထမတော့ တော်တော်လေးကိုပျော်သွားတယ်.
သတင်းတွေ confirm ဖြစ်အောင်လိုက်ရှာတာ တစ်ခုမှ မတွေ့ဘူး..နောက်သူငယ်ချင်းတွေကို မေးတယ်…
သူတို့လည်းယောင်ဝါးဝါးပဲ…တစ်ချို့က ကူးပြီး forward လုပ်ကြတယ်..
သတင်းကို အမှန်အတိုင်းတင်စေချင်ပါတယ်..စာဖတ်သူတွေ သတင်းအမှားကြီးဆိုတာ သိရပြီးတဲ့နောက်ဆို
အဲဒီဆိုဒ်ကို အထင်ကြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး..ထင်ရောင်ထင်မှားတွေရေးပါများရင် အမှန်ရေးရင်တောင် ..
forward မေးတွေကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ရှိမရှိ သုံးသပ်ပြီးမှ forward လုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်..
I call upon the services of all soldiers to know their duty and rise up against the traitors Than Shwe. He is selling country`s wealth illegally to his masters, China, India and North Korea. He is now in the pockets of Communist China and North Korea. People said that Burma is one of the province of China. To save the mother country and army in the name of people of Burma and ancestors Burmese independence, I call upon all soldier to turn the gun against Than Shwe and Co. People will come out into the streets as soon as they realize that army is siding with the people. All the soldiers. The country is calling for your patriotic services. Catch the traitors. It is extreme calls of the duty Burma needs. Listen to your instinct and serve your people and distance yourselves from the dictators. Long lives the patriotic soldiers. Shoot the traitors. End their lives. Save your country. Bravo.